WIC အကျိုးခံစားခွင့်ချက်ပြုတ်နည်းသစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ CAT 19 | JPMA, Inc
ကောင်းစွာအစာစား = ကောင်းစွာခံစားမိ
လတ်ဆတ်သောငှက်ပျောသီး, granola နှင့်ဒိန်ချဉ်တို့ကိုသရေစာ / အချိုပွဲတစ်ခုဖန်တီးရန်ပျော်စရာနည်းလမ်းဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်
သစ်တော်သီးနှင့်အ Cranberry ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ
Peachy မြေပဲထောပတ် Pocket
ဒါဟာကြည့်ခြင်းနှင့်ကြွယ်ဝသော, အရသာချောကလက် pudding တူသောအရသာပေမယ့်တစ်ဦးမှည့်သောထောပတ်သီးနှင့်ငှက်ပျောသီးနှင့်အတူစတင်သည်။
အသစ် - Barley Jambalaya
ဤစပ် Cajun ဂန္ထဝင်သည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖြင့်တင်ထားသည်
ထောပတ်သီးနဲ့ဥ Waffle Topper
ထောပတ်သီးကင်ပေါ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားယူကြိုးစားပါ။ ဒီဗားရှင်းတစ်ဦးလွယ်ကူသော guacamole နှင့်ကြော်ကြက်ဥနှင့်အတူ toasty waffles ထိပ်ဆုံးမှ။
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း Cheddar ဟင်းချို
This isafavorite recipe in our preschool program and introduces kids to mangos,amore unusual fruit.
ပဲဟင်းကို Taco ဖြ
အနောက်တောင်ပိုင်း stuffing အာလူး
အလွန်ပူသော (သို့) အအေးအရသာရှိပြီးအရသာအလွန်ကောင်းသည်
စတော်ဘယ်ရီ Cream ဒိန်ခဲ Waffles
Skillet ပြောင်းဖူး Chowder ဟင်းချို
မီးဖုတ်ထားသောချိုမြိန်အာလူး fries Cripsy
ဟင်းတူရကီ meatballs ခြုံ
ဝါရင့် meatballs လုပျရနျ, ချိုမြိန်ဖျက်စီးရမဲ့ပန်းသီးနှင့်ကုန်တယ်မြေပဲဒီစာရွက်ထဲမှာမြေတပြင်လုံးဂျုံ tortillas ှုနေကြသည်။
ငှက်ပျော Ice Cream
ဒုစရိုက်ဖြေစရာမလိုဘဲ creamy ကောင်းမြတ်ခြင်း
Lum နှင့် Parmesan နှင့်အတူဒေါက်တာ Yum Project ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း
ရုံ5မိနစ်ကအပူပိုင်းဒေသမှအအေးမိ, နှင်းဖုံးနံနက် မှစ. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ကြာအားလုံးပါ!
မြေတပြင်လုံးဂျုံအပေါ်ဆလတ်နှင့်ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်အတူချိုမြိန်ခြင်းနှင့် savory ကြက်သားသုပ်
ခရမ်းချဉ်သီး Parmesan တစ် scrumptious ဗားရှင်း။ သူတို့နွေး marinara ငံပြာရည်နှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည်မတိုင်မီသီးနှံနှင့် Parmesan ဒိန်ခဲတစ်ပြတ်သားအပေါ်ယံပိုင်းခရမ်းချဉ်သီးချပ်ပေါ် bakes ။
တစ်ဦးကကြည်လင်ပြတ်သားစွာနဲ့ savory Parmesan အပေါ်ယံပိုင်း appetizer ပြတ်သားသို့မီးဖုတ်ထားသောနွေရာသီ squash ချပ်လှည့်!
တစ်ပန်းကန်ထဲမှာဖျော်ရည်? ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲ? ဖွဲနုသီးနှံ ယူ. လွင်ပြင်အနိမ့်အဆီဒိန်ချဉ်, ငှက်ပျော, အဆီလွတ်နို့, မြေပဲထောပတ်, ပျားရည်နှင့်စပျစ်သီးပျဉ် add
မီးဖုတ်ထားသော Zucchini ချောင်းကို
Tex-Mex က Black Bean ကို Dip
သင်ဘယ်လိုဒိန်ခဲ, ခရမ်းချဉ်သီး, နှင့်ပဲမျိုးစုံမှားသွားနိုင်ပါတယ် (နှင့်ပိုပြီး!) ဿုံအရည်ကျိုသည်အထိဖုတ်? ဆန်ကျော်သို့မဟုတ်တစ် yummy သို့ကျဆင်းလာအဖြစ်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်။
ပဲဟင်းကို Confetti သုပ်
ဒေါက်တာ Yum Project Pineapple Power Salad
Apple ကနံ့သာမုန့်ဖုတ် oatmeal
အသစ် Apple Wraps
ဒေါက်တာ Yum Project Friteeni Frittatas
edရာမဖုတ်ထားတဲ့ Omelet လိုပဲ frittatas တွေဟာအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောသက်သတ်လွတ်အစားအစာဖြစ်ပြီးနံနက်စာသို့မဟုတ်ညစာအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကအစဟင်းသီးဟင်းရွက်အပိုတက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။
အသစ် Bow Tie Pasta Zucchini ဆော့စ်နှင့်အတူ
စိတ်ကျေနပ်စရာငံပြာရည်ဖန်တီးရန်ကျန်းမာ zucchini သုံးပြီးပန်းကန်မုန့်ညက်
Apple Berry ဟာ Taffaffles
သဘာဝကျကျချိုမြိန် applesauce နှင့်သစ်ကြံပိုးသည်ဤ toasty waffles ၏ထိပ်ပေါ်မှာလတ်ဆတ်တဲ့ blueberries ဖြည့်စွတ်။
ဤအ crispy-coated, zesty, မီးဖုတ်ထားသောချိုမြိန်အာလူးချပ်သည်ဤကြိုးစားပါ။ လွယ်ကူသောမုန်ညင်း-ဒိန်ချဉ်နှစ်ငံပြာရည်ပုရေစာပြီးဆုံး
အသစ် အင်္ဂလိပ် Muffin နံနက်စာသားညှပ်ပေါင်မု
New Black Bean ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းချို
Apple ကငါး Sandwich
သင့်ရဲ့ဥယျာဉ်ကို zucchini နှင့်အတူစိမ်းဖြင့်သောအခါ, ဤ savory, ကြော် fritters ပါစေ။ Cheddar ဒိန်ခဲနှင့်အစိမ်းရောင်ကြက်သွန်နီသူတို့ကိုတိုင်းပြည်အရသာထည့်ပါ။
Dr. Yum Project Sloppy Joe Slider
ကျွန်တော့်ကိုးနှစ်အရွယ်ကလေးဟာငရုတ်ကောင်း၊ ကြက်သွန်နီနဲ့မှိုတွေအားလုံးမှာလုံးလုံးရောင်းမရသေးဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်လို့သူတို့ကိုစားနပ်ရိက္ခာပရိုဆက်ဆာမှာကောင်းကောင်းခုတ်လိုက်ရင်သူကသူ့ကိုအရမ်းစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါဘူး။
Creamy ဖရုံသီး Topped Waffles
ရွှေဖရုံသီးရုံကျေးဇူးတုံ့ပြန်အဘို့မဟုတ်ပါ! ဤလွယ်ကူသောချိုမြိန်ခြင်းနှင့်အရသာ waffle topping အတွက်တစ်နှစ်-န်းကျင်ကခံစားပါ။
Peach နှင့် Cream Waffle Topper
creamy ဂရိဒိန်ချဉ်နှင့်မက်မွန်၏တုံးသည်ဤချိုမြိန်, သစ်ကြံပိုး waffles ဖြည့်ပါ။
ဒေါက်တာ Yum Project ပန်းဂေါ်ဖီအစက်များ
ပျမ်းမျှအမေရိကန်နိုင်ငံကနှစ်စဉ်အာလူး ၁၁၇ ပေါင်စားတယ်ဆိုတာမင်းသိပါသလား။ အာလူးဟာဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်မကြာခဏကြော်ပြီးကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်လေ့ရှိပါတယ်။ ပန်းဂေါ်ဖီ Tots နှင့်တွေ့ဆုံရန်!
ဟင်းသီးဟင်းရွက် Skillet ဥ
သရက်သီးဆဲလ်ဆာ Waffle Tostada
လွယ်ကူသောသရက်သီးနှင့်အနက်ရောင် bean ကိုဆဲလ်ဆာ toasted waffles များအတွက်လန်းဆန်း topper စေသည်။
White က Bean ကိုဟင်းသီးဟင်းရွက် Dip